Waadinews | Somali News and Entertainments | Archive | World News
Tiro ka mid ah waddamada islaamka iyo Carabta ayaa maanta oo salaasa ah ciiday, halka ay kuwo kalena ku dhawaaqeen in Salaasada maanta ah tahay dhammaystirkii Ramadaan Ciidduna ay Arbacad Barrito ku beegan tahay. Waddadama Salaasada maanta ciiday waxaa ka mid ah, Qadar, Sacuudiga, Kuwayt, Baxrayn, Imaaraatka, Yemen, Aljeeriya Iyo Sunniyiinta Ciraaq. Turkiga ayaa mar […]
Suudaan: Waxaa is-casilay guddoomiyaha Khartuum Mustafa Warraaq, isaga oo ka biyo-diiday qaabkii ay ciidamada Suudaan ula dhaqmeen dadkii dibad-baxyada ka dhigay caasimadda Khatruum oo sababay dhimashada 35 ruux. Kooxaha Mucaaradka Suudaan ayaa diiday qorshe uu golaha Ku-meel-gaadhka ah ee milatariga ku doonayo in doorasho lagu qabto muddo 9 bilood gudahood ah. Qaar ka mid ah […]
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo cambaareeyey go’aanka Qadar
Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhalleeceysay Qatar diidmadeeda natiijadii kasoo baxday wada-hadalladii ku saabsanaa xiisadda gobolka iyo Iran ee dhowaan ka dhacay magaalada Makkah, halka Imaaraadka ay ku eedeeyeen Doha inay dib uga guratay natiijada shirka. Qatar oo ka qeyb-gashay kulamo saddex maalmood socday oo ka dhacay magaalada barakeysan ayaa axaddii ku gacan seertay qodobada […]
Warar kala duwan ayaa sheegaya in rasaas laga maqlay fadhiisinka mudaaharaadayaasha Suudaan ee ku yaalla badhtamaha magaalada caasimadda ah ee Khartuum. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa telefeshinnada Carabiga ku hadla ayaa sheegtay in laamaha ammaanku ay galeen goobta ay mudaaharaadayaashu fadhiyaan. Dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in tallaabadaas lagu doonayo in […]
Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka, Mike Pompeo, ayaa sheegay in Marakanku diyaar u yahay wadahadallo uu Iiraan la yeesho oo bilaa shuruud ah. Pompeo ayaa hadalkaa ka sheegay dalka Switzerland oo uu booqasho rasmi ah ku marayo, dalkaas oo danaha Maraykanka wakiil uga ahaa Iiraan tan iyo sannadkii 1979. Hadallada Pompeo ayaa u dhadhamayay sidii kuwo […]
Sanada badan ayuu Anthony Gignac ku noolaa nolol boqortooyo oo raaxa leh. Waxa uu soo xirtay dahab qaali ah, waxaa uu raaci jiray diyaarado qaas amaba gawaari ay ku xiran yihiin tarikooyinka diblomaasiyiinta. Waxa uu sidoo kale isugu yeeri jiray “Sulaadaan”. Balse ugu dambeyn Jimcihii ayay soo afjarantay sheekadisii sheegashada amiirnimada. Garsoore jooga magaalada Florida […]
Wasiirka difaaca ee shiinaha Wei Fenghe ayaa Maraykanka ku cambaareeyey tallaabada uu ku taageeray madax-bannaanida Taiwan, iyo hawl-gallada uu ka wado badda Koonfureed ee Shiinaha oo la isku haysto, Balse wasiirku waxaa uu sheegay in dagaal dhexmara labada waddan uu masiibo horseedi karo. Mar uu Wei Fenghe hadal ka jeedinayey shir dhinaca ammaanka ah oo […]
Safaaradda Maraykanka Ee Dalka Honduras Oo Dab La Qabadsiiyey
Dad gadoodsan ayaa dab qabadsiiyey afaafka hore ee safaaradda Maraykanka ee dalka Honduras, iyaga oo ka cadhooday taageerada uu maamulka Trump u fidiyey madaxweynaha dalkooda Juan Orlando Hernandez oo ay dalbanayaan in uu Iscasilo. Mucalimiin, shaqaalaha caafimaadka iyo arday ayaa iskugu soo baxay waddooyinka magaalada Tegucigalpa iyaga oo ka soo horjeestay warar sheegaya in xukuumadda […]
According to the Telegraph, the World Health Organization will change its definition of disabilities to classify people without a sexual partner as “infertile.” The controversial new classifications will make it so that heterosexual single men and women, as well as gay men and women who are seeking in vitro fertilization to have a child, will receive […]
Shiinaha Oo Lagu Eedeeyey In Uu Xasilooni Darro Ka Abuurayo Qaaradda Aasiya
Ku-simaha wasiirka difaaca Maraykanka Patrick Shanahan ayaa Shiinaha ku eedeeyey in uu masuul ka yahay dhaqdhaqaaqyo taxane ah oo xasilooni darro ka abuuraya qaaradda Aasiya sidoo kalena sii kicinaya xurgufta u dhaxaysa labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Shanahan oo ka hadlayey shir wasiirrada difaaca ee gobolka ugu qabsoomay dalka Singapore ayaa ayaa xulafada […]
Koox hubaysan ayaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ku dilay wakiilkii dhinaca amniga ee hay’adaha Qaramada Midoobay ee Galmudug oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Khayre, kuna magac dheeraa Fiimto. Marxuumka ayaa la dilay xilli uu kasoo baxay masjid uu saaladda Taraawiixda kusoo tukaday waxaana dad goobjoog ahaa ay sheegeen in labo oo […]
Nin La Aasi Waayey Ilaa Uu Wiilkiisa Madaxweyne Noqday
Muddo laba sano ah oo dib loo dhigay, maydka aabaha madaxweynaha Congo ayaa ugu dambayntii lagu duugay meeshii uu ka soo jeeday. Etienne Tshisekedi oo ahaa mucaarad rugcadaa ah jirayna 84 sano ayaa ku geeriyooday Belgium bishii Febraayo 2017-kii. Balse maydkiisa ayaa lagu hakiyey Brussels iyada oo la sheegay inuu xumaa xidhiidhkii ka dhexeeyey madaxweynihii […]
Waxaa maanta ka furmaya magaalada Barakaysan ee Makka 3 Shir oo ay ku baaqday boqortooyada Sacuudigu. Habba in kasata oo boqorka Sacuudiga uu shirkaas ku martiqaaday madaxda Carabta oo uu ka mid yahay Amiirka Qadar Sheekh Tamiim Bin Xamd Aala Saani, haddana sida ay wararku sheegayaan waxaa dalka Qadar ugu qayb-gelaya ra’iisal wasaare Cabdulahi Bin […]
Ra’iisal Wasaaraha Dalka Papua New Guinea Oo Is-casilay
Ra’iisal wasaaraha dalka “Papua New Guinea” Peter O’Neill ayaa is-casilay kaddib toddobaadyo uu dalkaasi hadheeyey jaha-wareer siyaasadeed kaas oo horseeday inuu waayo kalsoonida baarlamaanka. Xildhibaannada xukuumadda taageersan ayaa wali ku rajo weyn in ay awoodda dalka gacanta ku sii hayaan. Peter O’Neill ayaa aad loogu sacabeeyey markii uu is-casilaaddiisa kaga dhawaaqay baarlamaanka hortiisa. Is-casilaaddiisa ayaa […]
Nigel Farage waa siyaasi si weyn uga muuqdo masraxa siyaasadeed ee Britain iyo Midowga Yurub. Wuxuu waday olole ballaadhan oo uu Ingiriiska kaga baxayo Midowga Yurub, waxaa uu ka mid yahay dadkii gadhwadeenka ka ahaa aftidii ka bixidda Britain ee Midowga Yurub. Nigel Farage waxaa uu kasoo horjeeda siyaasadda reer Yurub, inkasta oo dhawaan loo […]
Maxay 93 sano jirtan u baraneysaa duuliyenimada?
Jaceylka ay Mollie Macartney uqabto diyaradaha wuxuu soo bilawday xilligeedii dagaalka, haddana waxay noqotay duuliye waxayna dooneysaa in gabadha 12 sano jirka ah ee ay ayeyada utahay ugudbiso jaceylka ay uqabto dalxiska iyo diyaradaha. Maalin ay hawada daganeyd cirkana uu daruuro lahaa, ayaa Mollie oo 93-jir ah, waxay taagneyd garoon udhaw London ayadoo isu diyaarineysa […]
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Masar ay xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah shacabka, ay ka gaysteen jasiirad la moodda Sinai, kuwaas oo qaarkood u dhigma dambiyo dagaal. Hay’adda ayaa ugu baaqday dalalka caalamka inay joojiyaan taageerada ay siiyaan ciidamada Masar. Ciidamada dhulka iyo cirka Masar ayaa koox […]
ADDIS ABABA, Ethiopia — Ethiopia’s foreign affairs ministry has apologized for a map of Africa that erased neighboring Somalia. Spokesman Nebiat Getachew said in a statement on Tuesday an investigation had begun into how the map was posted on the ministry’s website over the weekend. He said the map was removed immediately after it was […]
Ra’iisal Wasaarihii Ugu Da’da Yaraa Madaxda Caalamka Oo Xilkii Laga Xayuubiyey
Baarlamaanka dalka Austria ayaa kalsoonidii kala noqday ra’iisal wasaariha dalkaasi Sebastian Kurz oo ahaa hoggaamiyihii ugu da’da yaraa caalamka. Xisbiga ay xulafada yihiin ee Freedom Party iyo xisbiga mucaaridka ayaa taageeray xil-ka-qaadistiisa. Sebastian Kurz ayaa waxaa galaaftay fadeexad ka dhalatay muuqaal muran abuuray oo hore u galaaftay Ku-xigeenkiisii sidoo kalena ahaa hoggaanka xisbiga Midigta Fog […]
Shaqo-Joojin ka bilaabmatay dalka Suudaan iyo Saamaynta Ay yeelatay
Mudaaharaadayaasha dalka Suudaan ayaa ku baaqay shaqo joojin dalka oo dhan ah, taas oo socon doonta 48 saac ee inagu soo aadan, iyaga doonaya in ay caddaadiska ku sii badiyaan milatariga si ay xukunka ugu wareejiyaan xukuumad rayid ah. Wadahadalladii labada dhinac ayaa la isku mari waayay kaddib markii lagu heshiin waayay qaabka loo marayo […]
Waxay qaadan doontaa 202 sano inuu meesha ka baxo farqiga u dhaxeeya ragga iyo dumarka marka ay timaaddo fursadaha dhaqaalaha ee dunida – sida uu sanadkii hore sheegay Ururka Dhaqaalaha Adduunka. Daraasado badan oo la sameeyay ayaa muujinaya in sinnaan la`aan badan ay ka jirto goobaha shaqada. Sidaas daraaddeed, waxaan halkan idinkugu haynaa shan qodob […]
Soomaaliya oo Itoobiya kala hadashay khariiraddii laga saaray
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Itoobiya kala hadashay sawirka khariidaddii ay wasaaraddooda arrimaha dibaddu soo daabacday ee markii danbe ay ka saartay website-kooda. Sawirkan ayaa muujinayey Soomaaliya oo laga saaray khariidadda laguna daray dalka Itoobiya. Wasiirka Arrimaha dibedda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad, ayaa VOA u sheegay in isla markii ay ka warheleen khariidadda la […]
Hindiya ayaa ka mid ah waddamada Ugu Muslimiinta badan caalamka, balse tirada Musliiminta ah ee ku jira baarlamaanka ayaa aad u yar. Iyada oo Islaam nacaybka uu soo badanayay sanadadii dambe, ayaa waxa jirta cabsi hor leh kaddib markii xukunka dalka ay dib u qabsadeen xisbiga Bharatiya Janata Party (BJP) oo ah mid u janjeera […]
Jarmalka Oo Yahuudda Uga Digay In Ay Xidhaan Koofiyad Dhaqameedkooda
Masuulka xukuumadda Jarmalka u qaabilsan arrimaha Yahuud Nacaybka (anti-Semitism) Mr. Felix Klein ayaa uga digay dadka Yahuudda ah in ay xidhaan koofiyaddooda gaarka ah marka ay tagayaan goobaha guud ee bulshadu ku kulanto. Masuulkan ayaa yidhi Yahuud kulama talinayo in goor kasta iyo meel kasta oo Jarmalka ah u xidhaan koofiyaddooda gaarka ah maadaama ay […]
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ayna wax cabsi ah ku haynin sawaariikhdii ay dhawaan tijaabisay Kuuriyada Waqooyi isaga oo hoosta ka xarriiqay kalsoonida uu ka qabo in hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu ballintiisa ka soo baxayo. Trump ayaa boggiisa Twitterka ku soo qoray “Kuuriyada waqooyi waxa tijaabisay hub fudud taas oo ka cadhaysiisay […]
Kooxda Xuuhtiyiinta ayaa sheegay in ay diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ku duqeeyeen madaarka diyaaradaha dagaalka ee Magaalada Jazan oo ku taalla meel u dhaw xuduudda Sacuudiga iyo Yemen. Telefishanka ku hadla afka Xuuthiyiinta ayaa sheegay in kooxdu weerarka fulisay kaddib markii ay samaysay sahamin dhinaca sirdoonka ah taas oo suuro-gelisay in duqaynta lala beegsado bartilmaameedkii […]
Nuxurka Kulan Dhex-maray madaxweynaha Masar iyo Hoggaamiyaha Golaha Milatariga Suudaan
Madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al-Siisi iyo Hoggaamiyaha golaha milatariga Suudaan Cabdilfataax Al-Burahaa ayaa kala saxeexday heshiis la xidiidha sugitaanka xuduudda labada waddan iyo la dagaalanka aragagaxisada. wararka ayaa sheegaya in hoggaamiye Al-Burhaan uu Siisi u ballan qaaday in ayna dalka Suudaan sii joogi doonin dadyowga ay raadinayaan hay’adaha ammaanka Masar”. Golaha Milatariga Suudaan ayaa mar sii […]
Xiisadda U Dhaxaysa Uganda Iyo Rwanda Oo Sii Xoogeysatay
Uganda ayaa ku eedaysay askarta Rwandiiska ah in ay soo galeen dhulkooda ayna ku dileen laba qof. Waddamadan oo ahaa kuwa xidhiidh dhaw lahaa, ayaa labadooda madaxweyne muddooyinkii u danbeeyey midba ka kale ku eedeynayey basaasid, shirqool siyaasadeed iyo faragelin midba hawlihiisa ah. Marka loo eego eedeymahii ugu danbeeyey, askar Rwandiis ah ayaa Jimcihii dabagalay […]
Xukuumadda Kuwayt ayaa ka dhawaajisay in ay diyaar u tahay dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Iran, kaas oo la mid ah hadal ay hore u sheegtay Saldanadda Cumaan. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwayta Khaalid Al-Jaar Allah ayaa tibaaxay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu la yimaado dedaalo ku filan oo laga dejiyo xiisadda ka […]
Madaxweynaha Maraykanka Donlad Trump ayaa Jimcihii sheegay in uu u murugooday ra’iisal wasaaraha Ingiriiska Theresa May oo ku dhawaaqday in ay iscasilayso kaddib markii ay ku guul darraysatay tallaabooyinkii ay dalkeeda kaga saari lahayd Midawga Yurub. Trump oo Warfidiyeennada kula hadlay Aqalka Cad ayaa sheegay In May ah tahay gabadh miisan leh oo dedaal badan […]
Golaha millatari ee sida kumeel gaarka ah u xakuma dalka Sudan ayaa wacad ku maray in ay taageeri doonaan dalka Sacuudiga, haddii ay khatar kaga timaado dalka Iran oo ay Sacuudiga hadda ku xafiiltamayaan siyaasadda Bariga Dhexe. Kaddib kulan uu Jimcihi maanta magaalada Riyadh kula yeeshay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salman, ayuu General Mohamed […]
Darawal Shiineys ah oo loo ganaaxay arin cajiib ah
Nin darawal ah oo ka shaqeeya Bariga Shiinaha ayaa la ganaaxay kadib markii ay kaamerooyinka taraafikada sawireen isagoo wejiga xoqanaya, sida ay ku warrantay warbaahinta dalkaasi. Sida uu sheegay wargeyska Jilu Evening Post, ninka oo lagu magacaabay Liu ayaa Isniintii gaari ku waday magaalada Jinan ee bariga gobolka Shandong, waxaana uu gacanta la aaday wejigiisa […]
Xildhibaan Maraykan ah oo xaaskiisa damaaciyay balse xabsi la geeyay
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Mississippi ee dalka Maraykanka ayaa lagu eedeeyay in isaga oo sakhraansan uu tacaddi u gaystay xaaskiisa, isaga oo qoonsaday in ay wakhti dheer ku qaadatay in ay dharka iska bixiso markii uu damcay in uu u galmoodo. Doug McLeod oo 58 jir ah ayaa la xiray habeenkii Sabtidii, isaga oo […]
Sucuudiga Oo La Sheegay In Uu Dil Ku Fulinayo Saddex Wadaad Oo Caan Ah
Dawladda Sucuudiga Carabiya ayaa ayaa lagu wadaa in ay dil ku fuliso 3 wadaad oo lagu xukumay inay Argagixiso Yihiin. Saddexda sheekh ee la xukumay waxaa dilka lagu fulin doonaa Ramadaantu Marka ay dhammaato. Magacyada Saddexda Sheekh ayaa kala ah :- 1- Sheekh Salman Al-cawdah. 2- Sheekh Cawad Al-Qarni. 3- Sheekh Ali Al-Omari. Wargayska middleeasteye […]
Maraykanka Oo Ka Baaraan-degaya In Uu 5 Kun Oo Askari U Diro Bariga Dhexe
Wasaaradda Gaashaan-dhigga Maraykanka ayaa ka baaraan-degaysa codsi uga yimid ciidanka oo ku aaddan in ku dhawaan 5 kun oo askari ee dheeraad ah loo diro Bariga Dhexe iyada oo ay ka sii darayso xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran, Sidaana waxaa wakaaladda Wararka ee Reuters u sheegay laba masuul oo ka tirsan wasaaradda Difaaca ee […]
Turkiga: Diyaar baan u nahay Cunaqabataynta Maraykanka
Wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay cunaqabataymo kaga yimaadda Maraykanka oo la xidhiidha iibsashada gantaalaha Ruushka ee S-400. Balse waxa uu xusay in uu dareemayo in ay ka soo raynayaan wada-hadallada uu dalkiisu kula jiro Maraykanka ee ku saabsan in Washignton ay Ankara ka iibiso diyaaradaha dagaalka ee F-35. […]
Aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo Ruushka ayaa cambaareeyey kuna sheegay wax aan la aqbali karin waqti la sheegay in Mareykanka uu u qabtay Turkiga, si uu uga laabto heshiis uu ku iibsanayo habka difaaca gantaallaha Ruushka ee S-400, taa beddelkeedna uu iibsado midka Mareykanka ee Patriot. Moscow ayaa ka jawaabaysay warbixin uu baahiyey taleefishinka CNBC […]
Guddiga milatariga ee maamula Suudaan ayuu caddaadis ku sii badanayaa si ay dib ugu billaabaan wadahadalladii ay kula jireen hoggaamiyeyaasha dibad baxayaasha, ka dib markii uu hakaday galinkii hore ee tallaadada. Maraykanka, UK iyo Norway ayaa ka digay in haddii xukuumad aan rayid ahayn ay talada qabato ay arrintaasi carqaladayn karto calaaqaadka ay Suudaan la […]
A US jury has found that a former Uber driver living in Virginia committed acts of torture during Somalia’s civil war in the late 1980s. Somali citizen Farhan Tani Warfaa testified last week in the Washington DC suburbs that ex-Somali colonel Yusuf Abdi Ali shot and tortured him. Ali was a commander in the national […]
Janaraal Khaliifa Xaftar oo ah hoggaamiye kooxeed ka dagaalama dalka Liibiya ayaa ku hanjabay in uu duqayno doono doon kasta oo ka timaada Turkiga oo ku soo xidhata xeebaha galbeed ee dalkaasi. Tallaaban ayaa u muuqata mid lagu carqaladaynayo taageerada uu Turkigu u fidinayo xukuumadda Caalamka aqoonsan yahay ee xarunteedu tahay caasimadda dalkaasi Liibiya ee […]
Maraykanka: Xildhibaan Ilhaan Cumar Oo Baarlamaanka Horgaysay Hindise Sharciyeed Ka Soo Horjeeda
Xildhibaanadda laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Ilhaan Cumar, ayaa Aqalka Congress-ka geysay hindise sharciyeed difaacaya xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda. Waxay dooneysaa in arrimaha socdaalka laga hor istaago qof kasta oo gacan ka gaysatay fulinta sharciga ay meel marisay boqortooyada dalka Brunei ee dhigaya in la mamnuucay in ay […]